७ बैंकहरुले ब्याजदर सार्बजनिक गरे, कुन बैंकले कति ब्याज दिने ? « News24 : Premium News Channel
७ बैंकहरुले ब्याजदर सार्बजनिक गरे, कुन बैंकले कति ब्याज दिने ?
काठमाडौं, ३१ भदौ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसहित ७ बैंकहरुले ब्याजदर सार्बजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले आफूसँग कारोबार गर्दा ग्राहकहरुले पाउने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभेरेष्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक रहेका छन् । जसमा उनीहरुले पछिल्लो समयको ब्याजदर उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । उसले मुद्धति निक्षेपमा व्यक्तिगत ६ प्रतिशत र संस्थागत ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रय बाणिज्य बैंकले कर्जातर्फ बेष्ट रेटमा न्युनतम् १.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ३.२५ प्रतिशत लिने जनाएको छ । ।
एभरेष्ट बैंकले पनि आफ्नो ब्याज सार्वपनिक गरेको छ । उसले साधारण निक्षेपमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । उसले मुद्धति निक्षेपमा ५.५० प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ । कर्जातर्फको ब्याज बेस रेटमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर लिने बताएको छ ।
स्टाण्डर चार्टर्ड बैंकले पनि आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै साधारण निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । उसले मुद्धति निक्षेपमा अधिकतम् ६.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने जनाएको छ ।
कर्जातर्फ उसले बेष्ट रेटमा २ प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने जनाएको छ ।
यस्तै हिमालय बैंकले पनि आफ्नो ब्याजद सार्वजनिक गर्दै साधारण निक्षेपमा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । त्यस्तै उसले मुद्धति निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
एनसीसी बैंकले पनि ब्याजदर सावैजनिक गर्दै साधारण निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म र मुद्धति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशतसम्म दिने जानएको छ । कर्जा तर्फ भने एनसीसीले बेसरेटमा २ देखि ५ प्रतितशसम्म प्रिमियम लिने बैंकले जनाएको छ ।
सनराइज बैंकले ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै साधारण निक्षेपमा २.५० प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म र मुद्धति निक्षेपमा ७.७५ प्रतिशतसम्म दिने जनाएकभो छ। उसले कर्जातर्फ बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने जनाएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले साधारण निक्षेपमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म दिने सुचनामा भनेको छ । उसले मुद्दति निक्षेपमा ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख जनाएको छ। एसबीआई बैकले कर्जामा भने बेस रेटमा १.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर लिने जनाएको छ ।
दातृ निकायले दिने २७ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण लिन अध्ययन कार्यदल गठन